Training | Aquarius Tech Myanmar Web Design, Website Development, Ecommerce Development and Facebook Advertising in Yangon, Myanmar - Aquarius Tech Myanmar
09-971-846-180 , 09-269-532-082
နည်းပညာလိုက်စားရင်း အချိန်ကုန်လူမောဖြစ်နေကြရတဲ့ ညီငယ် ညီမငယ်များအတွက် စေတနာအရင်းခံပြီး အချိန်တိုတို အတွင်း တတ်မြောက်အောင် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆရာ / ဆရာမ များကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးမှာမို့ လေ့လာရလွယ်ကူပြီး ကွန်ပြူတာအခြေခံရှိသူ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်တဲ့သင်တန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းရဲ့ စည်းကမ်းချက် များကတော့
သင်တန်းချိန်မှန်ကန်ရမည်။ (အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် အတန်းတက်ရက်မှန်ပြီး အိမ်စာများကို လုပ်မည်ဆိုမှသာ တက်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။)
Grid layout for Web Designer
Create Web Template Design
WordPress မှာ WP_Query ဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ The Loop တွေရှိပါတယ်။ WordPress က PHP ကို အခြေခံထားတဲ့ အတွက် PHP ရဲ့ အခြေခံ သဘောတရားတွေကို သိထားပို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
Themes တစ်ခုကို အခြေခံပြီး plugin တွေကို မသုံးပဲ PHP Funtion တွေကို အသုံြး့ပုပြီး Category တည်ဆောက်နည်း။ Categoryအောက်က Post တွေ Looping ပတ်ပြီး Display လုပ်နည်းနှင့် Custom Post တည်ဆောက်နည်းများနှင့် Real Project တစ်ခုတွင် လိုအပ်သည်များကို သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းတွင် လက်တွေ့ Project အနည်းဆုံး (၂)ခု ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရေးဆွဲရပါမည်။
Java Foundation အတန်းမှာတော့ Real life application များ ၊ Mini Project များကို စာတွေ့ လက်တွေ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်တဲ့အတွက် Computer Basic ကို ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ထားပြီး Java Programming ကို အမှန်တကယ် စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာမည်ဆိုမှာသာ တက်သင့်ပါသည်။
1. Java Overview
5. Basic Datatypes
14. Date Time
16. File I/O
18. Inner Class
19. Object Oriented
Haveaquestion or need to discuss with us about your website?
No.59, Room 004, Pan Chan Kyaung Street, Hlaing Township, Yangon, Myanmar
Copyright © 2017-2019 Aquarius Tech Myanmar Company Limited, (Registration No: 120094424). All rights reserved.